A na-eme agbụ anyị site na ihe ndị na-agbanwe agbanwe ma na-ejigide ya na ọkwa kachasị mma enwere ike, ìgwè ndị a abụghị ihe mmịpụta ma ghara ịgbaji ma ọ bụ wulite n'ụkwụ gị ka ị na-arụ ọrụ; tinyere akwụkwọ mmega ahụ nke nwere ọtụtụ uru kachasị mma na mmega ahụ na - ewusi ike, tinyekwara kọmpụta mkpanaka na obere mkpanaka maka iburu ìgwè ndị njem na njem dị anya.
Ejiri akwa abụọ nwere uwe gbakwunyere na-agbakwunye nke dị nro ma na-adọrọ adọrọ maka akasi obi kachasị, agba mara mma maka nhọrọ gị, dị mma ile anya ma nwee ike ịdị ogologo, akwa sweatband nwere ezigbo elasticity nke na-eme ka ha dabara karịa ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, nke ukwuu maka egwuregwu niile, anaghị agba agba, ahịhịa na-eguzogide ọgwụ na-eme ka ị dị oke mma.
Na-akwalite mmụba ọzọ na ikpo ọkụ na ọsụsọ mgbe eji ya n'oge mmega ahụ; Onwere ma gbanwee ka ịgbanwe ya na oke gị. Naanị gbatịa ya gburugburu mpaghara apata ụkwụ gị. Gụnyere ndị na-eme ka apata ego dị larịị 2 nke ezigbo nkasi obi; Ihe Akụrụngwa nke Nkwado siri ike; Wraparound Style mfe iyi na wepu; Nkwado Neo Loose na-enyere aka mee ka akwara apata ụkwụ sie ike ma nwee nchebe
Uwe a na-eme na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha, mkpakọ dị nro na-enye ohere iji awa 24, ọbụlagodi mgbe ị na-ehi ụra. Na nkasi obi ma jiri nlezianya na-eyi uwe n'okpuru uwe maka ịrụ ọrụ ma ọ bụ mgbake, teknụzụ na-esi ísì ụtọ, na-achịkwa ahụ ọkụ, nje na-egbochi nje na-esi ísì ụtọ. Ngụkọta obi na - egbochi ịgbatị ma na - eme ka ọbara gbasaa, na - enyere aka belata nkwụcha ọbara
A na-eji nkwado nkwonkwo ụkwụ iji gbochie ma ọ bụ belata ihe mgbu ahụ n'ihi uru azụ na mmerụ ahụ. Igwe eji akwa skidone nke abụọ skilone, teknụzụ eji atọ dị atọ, teknụzụ silicone mat abụọ, iku ume iku ume na-ajụ sultry. Ọ pụrụ igbochi mmerụ ahụ nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ n'oge mmegharị ahụ ma chebe akwara na nkwonkwo ụkwụ nke ọma.
Otu mpempe nkwonkwo ụkwụ na-akwado nkwado
A na-eji akwa ahụ na-enweghị ntutu ntutu dị mma nke mejupụtara ihe omume SBR. Ngwakọta a na-etinye agịga anọ na eriri ahịrị isii na akwa elu na nke ala nwere oghere dị mma ma dịkwa mma iyi. A na-eji nche na nkwonkwo ụkwụ mee ka nchebe sie ike na nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ. Ihe nlere a na-agbaso ụdị akwa eji emeghe emeghe, nke enwere ike idozi ya dabere nha ihu ụkwụ.
Nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ
Kwà pụrụ iche, akwa iku ume na-a sweụ ọsụsọ na -eme ka ụkwụ gị na -ewekwa nkụ. Nkwado kachasị mma maka ntachi obi, akụrụngwa teknụzụ pụrụ iche nke dabara na nkwonkwo dị iche iche. Gbaa ukwu ma sie ike, na-egbochi aka uwe na-efefe ruo n'ụkwụ. Nchedo zuru oke na-ebelata nkwonkwo ụkwụ nkwonkwo ụkwụ, na-egbochi ma na -eche mgbu mgbu plantar fasciitis.
Ngwongwo ngwakọta nke na-agbanwe agbanwe nke na-agbanwe agbanwe, ruo 11 '' n'ụdị ụkwụ ọ bụla. Mepee ikiri ụkwụ mepere emepe, dị mma maka egwuregwu ime ụlọ na n'èzí, na-enye nkwado maka akwara ụkwụ na nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ. Ngwurugwu neoprene nwere ike ime ka aru ghara ikpo oku ma gbochie akpukpo aru. Nkasi obi, na-agbanwe agbanwe, na -ebi ike ma na -emechi ahụ, nwere akpụkpọ ahụ ma na-ekwukwa oke.